QAADKA, QABYAALADA IYO QAB-QABLAYAASHA. | Wargeyska Xog-Ogaal
QAADKA, QABYAALADA IYO QAB-QABLAYAASHA.
CADOWGA KOOWAAD EE DADKA SOOMAALIYEED DHEXDOODA EE XALKA LOO WAAYEY . waa sadex oo kala ha Qaadka, Qabyaallada iyo Qab-qablaayaasha dagaalka.
Calaamadaha Qaran-jabey waxaa lagu gartaa in ay Dadku ama Mujtamacu awood u waayaan xalinta dhibaatooyinka haysta, qofkastoo Soomaali ah waa uu garanayaa meesha dhibtu ka jirto hadana waxay inta badan dadku ka niyad-jabeen in mar uun Soomaali Nabad iyo Dowladnimo gaari doonto. Hadaba maxay yihiin dhibaatooyinkaa waaweyn ee xalka loo waayey ? maxaa keenay in la xalin waayo ?
Adeer Qaad ii soo qaad, mijin ayaan ku siinayaa !!
” Waqtiga isku dhaafi ama ku lumi.
” Fadhi-ku-dirika ka qayb-qaado.
Qaadka Soomaaliya kama baxo , waxaa diyaarado iyo gaadiidka dhulkaba looga keenaa Wadamada dariska la ah Soomaaliya sida Kenya iyo Ethiopia, labada wadan ee laga keeno qaadka shacabkoodu inta badan qaadka ma cunaan laakiin way beertaan si ay ugu iib geeyaan dalka Soomaaliya oo si xad dhaaf ah looga isticmaalo. waxaa lagu qiyaasaa in ay ku baxdo lacag dhan Hal malyuun iyo bar Dollar maalin kasta.
Qaadka waxaa inta badan cuna oo si joogta ah macaamil ka ah, dadka wax dhaca, dad yar oo dibadaha lacag looga soo diro iyo shaqaalaha hay’adaha gargaar ah oo intooda badan lacag badan ka lunsada kaalmada loogu talogaley mashaariicda horumarinta loogu yeero.
Qaadku wuxuu keenay dhibaatooyin farabadan sida mid bulsho Caafimaad iyo mid dhaqaalaba waxaana hubaal ah inuu isagu sabab u yahay, daryeel la’aanta dhalaanka iyo hooyooyinka guud ahaan dhulka Soomaaliyeed iyo Ma’shaqeystenimada oo hoos u dhigay wax-soosaarkii Dalka, wuxuu kaloo dhiiri galiyaa Jabhadaha qaska iyo colaada wada Dalka.
Halku-dhiga Qabyaaladda waxa ka mid ah:
” Magaaladaan Qabiilkeenaa leh. sidaa darteed waxkasto inagaa leh Dad iyo Duunyaba.
” Anigaa Kaa laandheeraysan, marka ha iga bada-hadlin.
QABYAALLADDU waa cudur ka soo farcamey Jahliga iyo caadooyinkii hore ee ay Soomaalidu laheyd waa hore, Qabyaalada oo la siyaaseeyey ayaa asal u ah burburkii Qaranimada Soomaaliyeed, Hadaba yaa ku intifaaca ama ay dan ugu jirtaa Qabyaalladda, runtii ma badna inta ka faa’iideysta laakiin waxay inta badan dadka Soomaaliyeed ku qanciyeen inay qabyaaladu tahay hab-nololeed lagama maarmaan ah!. Waxay keentay in la isku xoog loo sheegto oo la boobo/baneysto hantida iyo sharafta shacabka soomaaliyeed ee aan laheyn qabiil ama Jabhad dagaalka jecel.
Qaranimo iyo Qabiilku isku meel ma gali karaan laakiin nasiib daro waxaa cad in Dadka soomaaliyeed intoodii badneyd lagu shubay fikrado qaldan sidaa darteed uu dhumo is-aaminkii iyo walaaltinimaadii dadka Soomaaliyeed.
Halku dhigoodu waa;
” Madaxweyne i dhaha hal mar .
” Haddii aan Jago la i siin, wax soconaayo ma jiraan.
Qab-qablayaasha Dagaalka oo ka faa’iidaysanaya kala aamin baxa soo dhec galay dadka Soomaaliyeed ayaa ah Cadowga koowaad ee dadka iyo dalka Soomaaliyeed, waxaa suuro galiyey inay sii jiraan labada arin ee aan kor ku soo xusey ee kala ah Qaadka iyo Qabyaalada, maadaama ay dadkii soomaaliyeed xanuunsan yihiin waxay heleen fursad inay ku dheeldheelaan Mujtamaca Soomaaliyeed. waxay mar walba abuuraan colaad iyo kala aamin bax ummadda dhexdeeda ah.
Qab-qablayaasha oo u badan dad iyagu ciil iyo naceyb badan isku qaba ayaa waxay colaadii ku baahiyeen shacabka oo aan runtii iyagu colaad iyo naceyb isku qabin, laakiin markasto ah dulmanayaal la qalday oo lagu shubay mabaa’dii qabyaalad ku dheehan tahay.
Qormadan kaliya laguma soo koobi karo waxyeeladda sadexda cadow ee ay dadka Soomaaliyeed leeyihiin laakiin waxay mhiimadeedu in lagu tilmaamo cadowga shabta ah ee mujtamaca halaaga iyo dhibaatada ku ah, inkastoo qofkastoo Soomaali ah uu og yahay laakiin waxaa la yaab leh in wali la garan la’yahay dhibaatooyinka ay dhaxalsiiyeen dadkii iyo Dalkii soomaaliyeed.
← HALKANI WAA CEERI GAABO SOOMAALIYA. QAYLO-DHAAN! Qiso laga noxo iyo fariin. →